လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ (ဝေါဟာရ သင်ခန်းစာ) - Myanmar Network
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ (ဝေါဟာရ သင်ခန်းစာ)
Posted by Soe Soe Win on April 25, 2013 at 17:46 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ (Rights and Responsibilities at Work)
သင်အလုပ်စ၀င်နေပါပြီလား? ဒီလိုဆိုရင် အလုပ်ထဲမှာ သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုလိုတဲ့အခါ အသုံးဝင်မဲ့စကားလုံးများနှင့် စကားစုများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားအများစုကတော့ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆို (signaContract) ကြပါတယ်။ ဒီစာချုပ် ထဲမှာတော့ စည်းကမ်းချက်များ (Terms and Conditions)၊ လစာ (salary) နဲ့ ပိတ်ရက်ခံစားခွင့်များ (holiday entitlements) အပြင် နစ်နာမှု (သို့) အလုပ်ထုတ်ခံရမှု (grievances or dismissal) ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များပါ ပါဝင်ပါတယ်။စာချုပ်တွေဟာ တရားဝင် တာဝန်ခံစေ (legally binding) တဲ့အတွက် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးမှ လိုက်နာ (comply) သင့်ပါတယ်။
တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားခ ဥပဒေပြဌာန်းချက် (minimum wage legislation) ရှိပါ တယ်။ ဒီဥပဒေကတော့ အလုပ်သမားတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခထက်လျော့ မပေးရအောင် ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် စက်မှုနှင့်လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုများ (industrial and workplace accidents) မှ အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းမှုဥပဒေတွေ (health and safety laws) လည်း ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အစည်းအရုံးတစ်ခုတွင်လည်း အသင်းဝင်အဖြစ်ပါဝင် (joinaunion) နိုင်ပါတယ်။ ဒီသမဂ္ဂကို မိမိက နှစ်စဉ် အဖွဲ့ဝင် ကြေး (annual membership fee) ပေးထားပါက ၄င်းက အလုပ်သမားများရဲ့ ရပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် လုပ်ခတိုးမြှင့်ရေးတွင် ညှိနှိုင်း ပေးခြင်း၊ ဆန္ဒပြပွဲများကို စီစဉ်ပေးခြင်း (ballot strikes) တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ရာအတောအတွင်းမှာ အလုပ်သမားများ၊ အစည်းအရုံးများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများက များပြားလာသော ရပိုင်ခွင့်များအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီရပိုင်ခွင့်များထဲမှာ အလုပ်သမားများကို သူတို့ရဲ့ လိင်၊ ကိုးကွယ်သော ဘာသာတရား၊ မသန်စွမ်းမှုများအပေါ်လိုက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံတာကို ဆန့်ကျင်ခြင်း (anti-discrimination)၊ မီးဖွားခွင့် (maternity leave)နှင့် ဖခင်ခွင့် (paternity leave) ၊ နာမကျန်းခွင့် (sick leave) နှင့် ပင်စင်ထောက်ပံ့မှုများ (pension contributions) အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ကလေးသူငယ်များကို အလုပ် လုပ်ခိုင်းခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ နိုင်ငံအတော်များများမှာ တရားမ၀င်ပေမဲ့လည်း (ကလေး သူငယ်များရဲ့ လုပ်အားပေါ်၌)အမြတ်ထုတ်ခြင်း (exploitation) ကို ဆန့်ကျင်သော တိုက်ပွဲများကတော့ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ အခုအခါ U.K မှာ အငြင်းပွားနေကြတဲ့ ကြီးမားသော ပြဿနာကတော့ အခမဲ့ အလုပ်သင်ခြင်း (unpaid internship) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဘွဲ့ရပြီးသား သူတွေဟာ အလုပ်သင်လုပ်တဲ့အခါမှာ အတွေ့အကြုံကလွဲလို့ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရဘူးလို့ ပြောချင်တာပါပဲ။
အလုပ်ရှင်တွေဟာ အလုပ်သမားဥပဒေကို ချိုးဖောက် (fall out) ရင် အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို တရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နိုင် (take their employers to court) ပြီး နစ်နာကြေးများရယူ (claim damages) နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ-မတရားအလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ (unfair dismissal) အခါမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်သမားကို အဓမ္မအငြိမ်းစားပေးလိုက်တဲ့(constructive dismissal) အခါမျိုးများတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လုပျငနျးခှငျဆိုငျရာ အခှငျ့အရေးမြားနှငျ့ တာဝနျမြား (Rights and Responsibilities at Work)
သငျအလုပျစဝငျနပေါပွီလား? ဒီလိုဆိုရငျ အလုပျထဲမှာ သငျ့ရဲ့အခှငျ့အရေးနှငျ့ တာဝနျမြားနဲ့ပတျသကျပွီး ပွောဆိုလိုတဲ့အခါ အသုံးဝငျမဲ့စကားလုံးမြားနှငျ့ စကားစုမြားကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
အလုပျရှငျနဲ့ အလုပျသမားအမြားစုကတော့ သဘောတူ စာခြုပျခြုပျဆို (signaContract) ကွပါတယျ။ ဒီစာခြုပျ ထဲမှာတော့ စညျးကမျးခကျြမြား (Terms and Conditions)၊ လစာ (salary) နဲ့ ပိတျရကျခံစားခှငျ့မြား (holiday entitlements) အပွငျ နဈနာမှု (သို့) အလုပျထုတျခံရမှု (grievances or dismissal) ဆိုငျရာ လုပျထုံးလုပျနညျး မြားပါ ပါဝငျပါတယျ။စာခြုပျတှဟော တရားဝငျ တာဝနျခံစေ (legally binding) တဲ့အတှကျ စာခြုပျပါ စညျးကမျးခကျြမြားအတိုငျး နှဈဦးနှဈဖကျစလုံးမှ လိုကျနာ (comply) သငျ့ပါတယျ။
တခြို့နိုငျငံတှမှောတော့ အနိမျ့ဆုံး လုပျအားခ ဥပဒပွေဌာနျးခကျြ (minimum wage legislation) ရှိပါ တယျ။ ဒီဥပဒကေတော့ အလုပျသမားတှကေို သတျမှတျထားတဲ့ အနိမျ့ဆုံးလုပျအားခထကျလြော့ မပေးရအောငျ ပွဋ်ဌာနျးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါအပွငျ စကျမှုနှငျ့လုပျငနျးခှငျမတျောတဆထိခိုကျမှုမြား (industrial and workplace accidents) မှ အကာအကှယျပေးတဲ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ဘေးကငျးမှုဥပဒတှေေ (health and safety laws) လညျး ရှိပါတယျ။ အလုပျသမားမြားအနဖွေငျ့ အစညျးအရုံးတဈခုတှငျလညျး အသငျးဝငျအဖွဈပါဝငျ (joinaunion) နိုငျပါတယျ။ ဒီသမဂ်ဂကို မိမိက နှဈစဉျ အဖှဲ့ဝငျ ကွေး (annual membership fee) ပေးထားပါက ၎င်းငျးက အလုပျသမားမြားရဲ့ ရပိုငျခှငျ့မြားကို ကာကှယျပေးခွငျး၊ အဖှဲ့ဝငျမြားအတှကျ လုပျခတိုးမွှငျ့ရေးတှငျ ညှိနှိုငျး ပေးခွငျး၊ ဆန်ဒပွပှဲမြားကို စီစဉျပေးခွငျး (ballot strikes) တို့ကို ဆောငျရှကျပေးပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈတဈရာအတောအတှငျးမှာ အလုပျသမားမြား၊ အစညျးအရုံးမြားနှငျ့ နိုငျငံရေးသမားမြားက မြားပွားလာသော ရပိုငျခှငျ့မြားအတှကျ တိုကျပှဲဝငျခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီရပိုငျခှငျ့မြားထဲမှာ အလုပျသမားမြားကို သူတို့ရဲ့ လိငျ၊ ကိုးကှယျသော ဘာသာတရား၊ မသနျစှမျးမှုမြားအပျေါလိုကျပွီး ခှဲခွားဆကျဆံတာကို ဆနျ့ကငျြခွငျး (anti-discrimination)၊ မီးဖှားခှငျ့ (maternity leave)နှငျ့ ဖခငျခှငျ့ (paternity leave) ၊ နာမကနျြးခှငျ့ (sick leave) နှငျ့ ပငျစငျထောကျပံ့မှုမြား (pension contributions) အစရှိသညျတို့ ပါဝငျပါတယျ။
ကလေးသူငယျမြားကို အလုပျ လုပျခိုငျးခွငျး အစရှိတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှဟော နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ တရားမဝငျပမေဲ့လညျး (ကလေး သူငယျမြားရဲ့ လုပျအားပျေါ၌)အမွတျထုတျခွငျး (exploitation) ကို ဆနျ့ကငျြသော တိုကျပှဲမြားကတော့ ဆကျလကျတညျရှိနပေါတယျ။ အခုအခါ U.K မှာ အငွငျးပှားနကွေတဲ့ ကွီးမားသော ပွဿနာကတော့ အခမဲ့ အလုပျသငျခွငျး (unpaid internship) ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆိုလိုတာကတော့ ဘှဲ့ရပွီးသား သူတှဟော အလုပျသငျလုပျတဲ့အခါမှာ အတှအေ့ကွုံကလှဲလို့ တဈပွားတဈခပျြမှ မရဘူးလို့ ပွောခငျြတာပါပဲ။
အလုပျရှငျတှဟော အလုပျသမားဥပဒကေို ခြိုးဖောကျ (fall out) ရငျ အလုပျသမားတှအေနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အလုပျရှငျတှကေို တရားရုံးမှာရငျဆိုငျနိုငျ (take their employers to court) ပွီး နဈနာကွေးမြားရယူ (claim damages) နိုငျပါတယျ။ ဥပမာ-မတရားအလုပျဖွုတျခံရတဲ့ (unfair dismissal) အခါမြိုး၊ ဒါမှမဟုတျ အလုပျသမားကို အဓမ်မအငွိမျးစားပေးလိုကျတဲ့(constructive dismissal) အခါမြိုးမြားတှငျ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
66 members like this
Permalink Reply by MiMi on December 21, 2014 at 20:41
Actually That is not only English lesson .We could know about alot of our chances.Everybody should know about that.thanks alot.